PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-04-15 - KUZOBA " KWAZ INTSHA YANAMUH
KUZOBA " KWAZ INTSHA YANAMUH
Ilanga langeSonto - 2018-04-15 - Ezikaqedi - ZOWAKHA
KUKHONA itemu elisetshenziswa yintsha kakhulu kulezi zinsuku elithi “lit” nongalihumusha ngokuthi kusazobamnandi, kubekuhle kakhulu kanti abanye bangathi nje “kusazobhujwa”.
Yiwona muzwa lo engisale nawo ekuqaleni kwesonto esiliphethayo sesithole uhlu olubuyekeziwe ngezinguquko ESAFM nakwiRadio 2000.
Khumbula phela sike sachaza phambilini ukuthi abaphathi BESAFM bathe bayawushintsha lo msakazo obuwaziwa njengesiteshi sezindaba kodwa manje usuzohambisa phambili izingxoxo.
Ungadideki-ke, ukhona umehluko phakathi kwalokhu okubili, manje sekuzovulwa kakhulu amathuba okuxoxa nabalaleli emoyeni esikhundleni sokwaziswa ngezindaba eziqhubekayo.
Yikho lokhu okwenze kwalandwa abantu abafana nostephen Grootes osenza uhlelo lwasekuseni (06h0009h00). Khumbula ukuthi lolu hlelo belwenziwa nguSakina Kamwendo.
Kaluzange lwenzeke kalula lolu guquko njengoba usakina eze wamiswa kabuhlungu esesemoyeni ngoba ubesolwa ngabaphathi ngokuhlasela isinqumo seSABC ngokushintshwa kwezinhlelo njengoba ebebelesele ngokuthi udungu- za ebumnyameni ngokuzokwenzeka.
Abaphathi bakubone njengesenzo esingasile lesi njengoba bephumele kwabezindaba bathi bebesezingxoxweni nosakina, ubazi kahle ngokuqhubekayo nokusho ukuthi ubegovuza umphakathi.
Akamusha ekumisweni njengoba nakwimetro FM wachithwa ngendlela ethi mayifane. Kukho konke esigcine sikuzwa, usuke eshayelwa ukunganqeni ukuperezisana nabaphathi njengoba kuthiwa akayigodli nhlobo imibono yakhe.
Lokhu ukuzwa nasezinhlelweni azishayelayo. Bekungeke-ke kwenzeke izinkunzi ezimbili zihlale esibayeni esisodwa njengoba ekuqaleni kuvele ezithi abaphathi bebefuna ukubafaka ndawonye nogrootes osuka e-702. Ugcine enikwa u-12h00-13h00.
Ugrootes uyinkunzi emidwayidwa njengoba ebesehlale e-702 iminyaka ebalelwa kweli-15, aphinde abe yintatheli nombhali wezincwadi.
Selokhu ziqalile izinhlelo zalaba kangikaze ngihlangane nohlelo olungahlelekile nolubhedayo. Kungicacele ukuthi impela ISAFM ishintshile ukwenza njengoba ngike ngahlangana nanengoma ye-alaska emini bebade ngacishe ngadideka ohlelweni olushayelwa ucriselda ngo-13h00-15h00.